Argagixiyihii Shaansa Lisee (Champs-Elysees) Paris wuxuu ahaa Danbiile Ragaad ah – Radio Daljir
Argagixiyihii Shaansa Lisee (Champs-Elysees) Paris wuxuu ahaa Danbiile Ragaad ah
Abriil 22, 2017 8:03 g 0
39 jirka magaciisa lagu sheegay Kariim Sharuufi wuxuu ahaa danbiile xabsiyada Paris dhowr jeer laga siidaayey oo galay dambiyo kaladuwan oo tuugaysi iyo dukaan-jabis u badan. Laakiin taasi waxay isbadashay markii uu Khamiistii qoriga Kalaashnikoovka ah ee AK47 ku dilay nin boolis ah, laba kalena ku dhaawacay.
Toogashadu waxay ka dhacday jidka caanka ah ee Shaansa Lisee (Champs-Elysees) oo muujiya xarragada, taajirnimo xad dhaaf ah, dukaamo qaaliga ah, iyo barwaaqada Paris. Laakiin Kariim Sharuufi oo ku dhashay xaafad daafaha Paris, xaafadaha Carabtu degto ee danyarta loona yaqaan Paris Banlieues (riix oo ka baro wikipedia waxa loo yaqaan Paris Muslim Ghettos), horayna u lahaa rikoor dheer oo danbiyo taxan, waayahaana la yiri wuxuu ammaan dheeri ah u hayey ururka Daacish, ayay u muuqataa in uu wax wayn ka badalay jawigii doorashada Faransiiska, dhacdadaana ay garab u noqonaysa siyasadda garabka midig-fog ee ay hugaamiso Marine Le pen.
Le Pen oo argagaxani fursad kale u noqday ayaa isla markiiba olalaheeda sii xoojisay ayada oo tiri “waxaan xirayaa dhammaan xuduudaha Faransiiska, waxaana ka xirayaa wixii aan Faransa u dhalan ama khatar ku ah nafta iyo danta Faransiiska.”
Sida Donald Trump ayey Le Pen ayana muujisay aragtideeda lidka ku ah Muslinka. Madaxweyne Trump ayaa isna aad u taageersan in Faransiisku doorto Marine Le Pen.
7 May ayaa la filayaa in ay isku soo haraan labada ku tartamaysa jagada Madaxweynaha Faransiiska. Waxaa Paris iyo Faransiiska oo dhan ka jirta feejignaan dheeri ah, waxaana la hawlgaliyey 50,000 isugu jira booliis iyo jendarmiis (gendarmes) iyo 7,000 askar milatari oo mar hore la hawlgaliyey.
Lama hubo saamaynta falkan argagaxa lihi uu ku yeelan doono codbixinta maalinka Axadda ee 7 May.
Radio Daljir kala soco doorashada Faransiiska
Gabdhoow Malabka Isticmaala, Dayaano Joojiya oo Caafimaad Hela
Caawa & Daljir iyo Maxamed Lakiman, Daljir Garoowe